သတင်း ရှုခင်း – ရှုခင်းသစ် NEW SIGHTS
Category: သတင်း ရှုခင်း
အ များ ဆို င် နာမ် က ဗျာစာအု ပ် ထွ က် ပြီ
Posted November 4, 2014 November 4, 2014 အိုးဝေမျိုးPosted in သတင်း ရှုခင်း
ကဗျာဆရာမင်းညွန့်လှိုင်နဲ့ရန်လင်းအောင်တို့ရဲ့”အများဆိုင်နာမ်”အမည်ရ ကဗျာစုစည်းမှုစာအုပ်ထွက်ရှိလာပါပြီ ။ကောင်းကင်၊ မိုးမခ နဲ့ ရှုခင်းသစ် အွန်လိုင်းမီဒီယာများမှာဖော်ပြပြီးကဗျာများကိုစုစည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရ ပါတယ်။ကဗျာဆရာကြီးမောင်နီမွန်ရဲ့အမှာစာလည်းပါရှိပါတယ်။ ခက်ဦးရဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုမှုနဲ့အတူအင်္ဂလိပ်-မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်နှိပ်ထားပါ တယ်။ မြကြိုးကြာစာအုပ်တိုက်ရဲ့ပွဲဦးထွက်တင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မင်းရဲညွန့်လှိုင်
Posted August 8, 2014 August 11, 2014 အိုးဝေမျိုး1 CommentPosted in သတင်း ရှုခင်း
ဟယ်မီတန်၊နယူးဇီလန် (၈) သြဂတ်စ်၊ ၂၀၁၄ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ဟယ်မီတန်မြို့ ၂၆ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး အခမ်းအနားကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်၊ရဲမေများ၊ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များက မမေ့မလျော့ ပါဝင် ဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။ အခမ်းအနားကို ခေတ်အဆက်ဆက် ဒီမိုကရေစီနှင့် လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသူများကိုအလေးပြုခြင်း၊ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲအတွင်း အသက်ပေးအနစ်နာခံသူများကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ရှစ်စက္ကန့် ငြိမ်သက်အလေးပြုခြင်း၊ ကျဆုံးသူများကို တိုင်တည်၍ သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုခြင်း၊ ရှစ်လေးလုံး ၂၆ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားသို့ ကရင်နီ တိုးတက်ရေး ပါတီမှ ပေးပို့လာသော သဝဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားခြင်းတို့နှင့် အမှတ်တရ စကားများပြောကြားခြင်း၊ အရေးတော်ပုံကြီးကို ထင်ဟပ်စေသော ကဗျာများ ရွတ်ဆိုခြင်း၊ သီချင်းများသီဆိုဂုဏ်ပြုခြင်း တို့ဖြင့် ဂုဏ်ပြူ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အမှတ်တရ […]
ဟယ်မီတန်ရောက် မြန်မာများ၏ တတိယ အကြိမ် ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူ ပွဲ
Posted July 19, 2014 July 20, 2014 အိုးဝေမျိုးPosted in သတင်း ရှုခင်း
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ဟယ်မီတန်မြို့ရောက် မြန်မာ မိသားစုများရဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှုပွဲကို ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်၊ စနေနေ့မှာ Glen view community center မှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အလှုတော်ပွဲကို နံနက် ၁၀ နာရီမှ နေ့လည် ၂ နာရီ အထိ ကျင်းပခဲ့ကြပြီး မြန်မာ ထမင်း၊ ဟင်း၊ ခေါက်ဆွဲကျော်၊ ကြာဇံကြော်၊ မုန့်ဟင်းခါးတို့အပြင် အအေး၊ ကျောက်ကျော အစရှိတဲ့ မုန့်ပဲသွားရေစာများ နဲ့ ကျွေးမွေး ဧည့်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှုပူဇော်ပွဲကို အောက္ကလန်မြို့မှ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၃) ကျောင်းမှ သံဃာတော် (၄) ပါးကြွရောက် ချီးမြှင့်ကြပြီး သံဃာတော်များများအတွက် ဝါဆိုသင်္ကန်း အစုံ (၂၀) […]
ကွယ်လွန်သူ မြန်မာ့ခေတ်သစ်ပန်းချီ ဦးဆောင်ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်ရင်သို့ ဂါရ၀ပြုကဗျာ
Posted June 13, 2014 June 13, 2014 Khin LunnPosted in ကဗျာ, သတင်း ရှုခင်း
ကွယ်လွန်သူ မြန်မာ့ခေတ်သစ်ပန်းချီ ဦးဆောင်ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်ရင်သို့ ဂါရ၀ပြုကဗျာ အရောင်ကြွေခြင်း ကြယ်ကြွေမှာကိုမမြင်ချင်ဘူး ကြယ်ကြွေမှာကိုမမြင်ချင်ဘူး ကြယ်ကြွေမှာကိုမမြင်ချင်ဘူး တစ်ခါက အဲဒီလိုရေးထိုးခဲ့ဖူးရဲ့ ဒီတစ်ခါ ကြွေကျသွားခဲ့တာက အရောင် အမှောင်ခေတ်ကြီးကို လက်ပြ တစ်ဖက်ကို ထွက်ခွာသွားရပြီ ဘယ်လိုစကားလုံးများနဲ့ နှုတ်ဆက်ရပါ့ ဘယ်လိုအသံထွက်များနဲ့ ဦးညွတ်ရပါ့ ခြွေစရာတွေအများကြီးထဲမှ အရောင်ကိုမှ ရွေးခြွေခဲ့ရတယ်လို့ လောကရယ် ရင်နာလိုက်ပါဘိတော့ ။ ။ ကိုထက်-ရေဦး (ပန်းချီဆရာကြီး ဦးခင်မောင်ရင် သို့ ….) 11 ၊ 06 ၊20 1 4
တပတ်အတွင်း အနုပညာလောက သတင်းများ
Posted June 13, 2014 Khin LunnPosted in သတင်း ရှုခင်း
မိုးရာသီ စာအုပ်ပွဲတော် ဇွန်လ ၆ ရက်၊၂၀၁၄ နေ့ကစပြီး ဇွန်လ ၈ ရက်၊၂၀၁၄ နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မကျောင်းလမ်း၊ အမျိုးသား ဇာတ်ရုံကြီးမှာ မိုးရာသီစာအုပ် ပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံစာပေထုတ်ဝေသူနှင့် ဖြန့်ချိသူများအသင်းက စီစဉ်တဲ့ပွဲပါ။ စာအုပ်ဆိုင်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်က လာ ရောက်ပြီး စာအုပ်မျိုးစုံကို အထူးလျှော့ဈေးနှုန်း နဲ့ ရောင်းချပေးနေတာမို့ စာပေချစ်မြတ်နိုးသူတွေ စည်စည်ကား ကား လာရောက်အားပေးနေကြပါတယ်။ ပြီးတော့ နေ့စဉ် မွန်းလွဲ ၁ နာရီကစလို့ အနုပညာရှင်တချို့ရဲ့စာပေအနုပညာဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲတွေကိုလည်း ကျင်းပမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ခေတ်သစ်ပန်းချီကျော် ဦးခင်မောင်ရင်၏နောက်ဆုံးခရီး ဇွန်လ (၁၀)ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့သော […]
ကဗျာဆရာ သုံးဦးတို့ရဲ့ကဗျာ (စည်သူငြိမ်း၊ ဘုန်းသက်ပိုင်၊ အောင်ခိုင်မြတ်)
Posted June 4, 2014 Khin LunnPosted in ကဗျာ, သတင်း ရှုခင်း
” တို့ပြည်” သာပါရဲ့ပြည်ရွှေဝါ လာပါလှည့်လေး ခရုိနီခရိုပြာ ခရိုဝါနက်နဲ့ လှမ်းခက်လှသေး ။ စည်သူငြိမ်း ……………. ကျွန်တော်မပျော်ခဲ့ပါဘူး အခုမှတော့ ဒီဝါကျနဲ့ပဲ အရာအားလုံးအဆုံးသတ်ရတော့မှာပဲ ကျွန်တော်မပျော်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ တစက္က္ဘန့်ပြီး တစ်စက္ကန့် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ကျွန်တော်ဟာ ရင့်ရော်လို့။ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့်ကြယ်ပွင့်လေးလို ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လို့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ခေတ်ကြီးကို တစ်ဘ၀လုံးကူးနေခဲ့တာဆိုတော့ တစ်ဘ၀လုံးတောင့်ခဲနေတော့တာပေါ့ ကျနော်မပျော်ခဲ့ပါဘူး။ ငယ်တုန်းကတော့ အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်ကြောင်း လေယာဉ်ပျံကြီးမောင်းပြီး ကမ္ဘာကြီးကိုအပေါ်က မိုးကြည့်ချင်ကြောင်း တဖွဖွပြောပြမိတယ်။ အခုတော့ ဘာဖြစ်ချင်သေးလဲ ကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းစေချင်တယ် ရွေးမိတဲ့လမ်းအတိုင်း တစ်ယောက်ထဲ ဒယီးဒယိုင်လျှောက်လို့၊ ဒဏ်ရာတွေနာလွန်းပေမယ့် မငိုအောင်တောင့်ထားလို့ ရင်တစ်အုံလုံး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လို့ ကတ်ကိုဘိန်း သူ့ဘ၀သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ချိန်မှာ ဘယ်သီချင်းကို သူဆိုသွားခဲ့သလဲ၊ ဟဲမင်းဝေးရွေးလိုက်တဲ့ကျည်ဆံဟာ နံပတ်ဘယ်လောက်လဲ၊ […]